Mpandika hira miaraka amin'ny Android | Androidsis
Androany dia tiako ampidirina ao anaty lisitra na sokajy misy ity fampiharana maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android ity fampiharana mahavariana ho an'ny android. Ary izany ve AirL Lyrics dia fampiharana izay na eo aza ny toetrany malalaka sy tsy misy fividianana fampiharana, ho ahy manokana dia mendrika ny lanjany amin'ny volamena izy, na ho an'ny hevitra manokana sy ho an'ireo fiasa atolotra antsika.
Araka ny efa nolazaiko anao, ny fampiharana dia azo sintonina mivantana avy amin'ny Google Play Store maimaim-poana ary Izy io dia miasa amin'ny ankamaroan'ny mpilalao ao amin'ny Google Market, na ireo mpilalao teratany marika marobe toa an'i Samsung, Sony na LG aza. Ity ambany ity dia omeko amin'ny antsipiriany ny fiasan'izy ireo, na dia manoro hevitra anao aza aho mba hijery ilay horonantsary amin'ny lohateny mba hahafantaranao ny fiasa goavambe an'ity mpandika hira miaraka amin'ny Android.
Hanombohana milaza aminao fa ity safidy an'ny fandikan-teny miaraka amin'ny Android tsy misy afa-tsy amin'ny kinova an'ny Android 3.0 mandroso, ka raha mbola iray amin'ireo vitsy ianao izay mbola ao amin'ny Android Gingerbread na ny dikan-teny manaraka dia tsy mety aminao ilay fandikan-teny fandikana miaraka.
Ho fanampin'ny fananana ny safidy vaovao fandikana hira miarakaManolotra safidy vitsivitsy tena mahaliana ihany koa ny AirL Lyrics izay tanisaiko etsy ambany:
Fikarohana tononkira mandeha ho azy eo am-pihainoana mozika amina mpilalao tianao.
Fandikana vaovao tononkira ho azy amin'ny fiteninao. Swipe ankavia amin'ny fijerin'ny taratasy (ho an'ny Android 3.0+ ihany) ary sokafy ny tontonana fandikana. Azonao atao ny manokatra an'ity tontonana ity amin'ny alàlan'ny menio.
Jereo ny tononkira ankafizinao ivelany.
Lohahevitra roa no misy, ny mazava sy ny maizina.
Ny cache miaraka amin'ireo tarehintsoratra farany dia nampiseho ireo litera farany, azo ovaina azo refesina mba hamonjy ny fanjifana angona.
Tahiry lehibe misy tononkira.
40kb isaky ny hira ihany no zahana raha tsy lyric tena tianao na ao anaty cache.
Mifanaraka amin'ny Android kinova 2.2 ary miakatra
Ny tsara indrindra, mba hanombohana mampiasa ity fampiharana mahavariana ity ho an'ny Android, dia tsy mila fanovana sarotra. Alefaso fotsiny ireo hira tianay ary fidio ny fampiharana AirLflix Ho ampy kokoa ny mankafy an'ity safidy manaitra ny fandikana ny tononkira ireo hira sy lohahevitra ankafizinay ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » AirL Lyrics; Mpandika hira miaraka amin'ny Android
Tsy hitako ilay app
MIRIAM TATIANA CHURA dia hoy izy:
Manantena aho fa mety amiko io ary nitady rindranasa toy izao aho
Valiny MIRIAM TATIANA CHURA